Xaalad aad u liidata: Wakiilka Qaramada Midoobay wuxuu ku booriyay Cameroon inay dib u soo celiso internetka gobollada ku hadla af Ingiriiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Cameroon » Xaalad aad u liidata: Wakiilka Qaramada Midoobay wuxuu ku booriyay Cameroon inay dib u soo celiso internetka gobollada ku hadla af Ingiriiska
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cameroon • News
Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Bartamaha Afrika, François Louncény Fall, ayaa maanta ku booriyay mas'uuliyiinta Cameroon inay si taxaddar leh u baaraan dhibaatooyinka dadka iyo ganacsatada gobollada ku hadla af Ingiriiska ee waqooyi-galbeed iyo koonfur-galbeed, kuwaas oo ahaa waxaa laga xannibay Internet-ka tan iyo bartamihii Janawari 2017.
“Tani waa xaalad laga xumaado. Laakiin waxaan ku qanacsanahay in qalabkan muhiimka ah ee horumarinta, isgaarsiinta iyo horumarka wadajirka ah si tartiib tartiib ah dib loogu dhisi doono guud ahaan Cameroon, ”ayuu yiri ka hor inta uusan ka bixin Cameroon 13-kii Abriil ka dib booqasho rasmi ah oo afar maalmood qaadatay.
Intii lagu guda jiray booqashada, Mr. Fall, oo sidoo kale madax ka ah xafiiska UN-ka ee Bartamaha Afrika (UNOCA), wuxuu dib u eegay xaaladda iyo qiimeynta saameynta tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay qaaday Dowladda si wax looga qabto tabashooyinka qareennada iyo macallimiinta ku hadla Afka Ingiriiska. UNOCA ayaa ku tiri war saxaafadeed.
"Waxan isdhaafsaday midho dhal iyo rajo leh dhamaan daneeyayaasha," Wakiilka Gaarka ah ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Yaoundé 12kii Abriil. Wuxuu la kulmay mas'uuliyiinta Dowladda, xubnaha bulshada rayidka ah, hoggaamiyeyaasha mucaaradka, xubnaha diblomaasiyadda iyo nidaamka UN.
Wuxuu sidoo kale la kulmay dad loo xiray loona xiray arrimo la xiriira waqooyi-galbeed iyo koonfur-galbeed, oo ay ka mid yihiin Felix Nkongho Agbor Balla iyo idaacadda raadiyaha Mancho Bibixy.
"Waxaan ku dhiirrigelinayaa Dowladda Cameroon inay qaadato dhammaan tallaabooyinka ay u aragto inay ku habboon yihiin, sida ugu dhaqsaha badan iyo qaab dhismeedka sharciga, si loo abuuro xaalado ku habboon in lagu dhiso kalsoonida loo baahan yahay si loo soo afjaro dhibaatada," ayuu yiri Mr. Fall.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, wuxuu carrabka ku adkeeyay "in la raadsado wadahadal daacad ah oo wax ku ool ah iyadoo la tixgelinayo guulaha la gaadhay ayaa ah muhiimadda koowaad." Wuxuu intaas ku daray, meeshii ay ku habboon tahay, UN-ka ayaa weli diyaar u ah inay sii wado "inay la socoto firfircoonaan si ay gacan uga geysato dadaallada mas'uuliyiinta iyo la-hawlgalayaashooda ee ku saabsan raadinta heshiis la isku oggol yahay iyo xal waara ee xaaladdan."
Mudane Fall wuxuu ku celiyey baaqii UN-ka ee dhamaan dhinacyada si wax looga qabto xaalada taagan iyadoo loo marayo qaab nabadeed iyo mid sharci. Wuxuu soo dhoweeyay ujeedka ay dowladdu ku dhawaaqday ee ah soo celinta adeegyadii internetka ee Bamenda ee isbitaalada, jaamacadaha iyo bangiyada, taasoo qeyb ka ah xirmooyinka tallaabooyinka uu ku dhawaaqay 30-ka Maarso Wasiirka Cadaaladda.
Wuxuu ku dhiirrigeliyey Dowladda inay tixgeliso tallaabooyin dheeri ah oo lagu dhisayo kalsooni si loo qanciyo xiisadaha, oo ay ku jiraan sii deynta hoggaamiyeyaasha Anglophone-ka, iyo dib u soo celinta adeegyada internet-ka ee labada gobol.
Mudane Fall wuxuu kaloo ugu yeeray hogaamiyaasha dhaq dhaqaaqa Anglophone-ka inay dowlada kala shaqeeyaan qaab wax ku ool ah si loo helo is afgarad iyo xal waara oo laga gaaro xaalada gobolada koonfur galbeed iyo waqooyi galbeed. Wuxuu xaqiijiyey rabitaanka UN-ka inay sii wado inay ku weheliso labada dhinac dadaalkooda wada hadalka.
Mr. Fall wuxuu ku laaban doonaa dalka Cameroon munaasabada kulanka 44-aad ee wasiirada heer qaran ee gudiga latalinta joogtada ah ee qaramada midoobay ee su'aalaha amniga ee bartamaha Africa waana dhamaadka bisha May, bilowga bisha lixaad ee sanadkan.